अझै स्ट्रबेरी को सिजन समाप्त, तपाईं संकोच गर्न सक्दैन। यो बेरी राम्रो स्वाद, तर पनि धेरै उपयोगी मात्र छैन। . यसलाई तपाईंले, व्यञ्जन विभिन्न स्ट्रबेरी Kurd सहित पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं विदेशी सामाग्री, बस पर्याप्त जामुन, चीनी, अन्डा र घिउ छ प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। यो पकवान एक साधारण कस्टर्ड समान छ, तर यसको संरचना कुनै दूध र आटा छ।
एक असामान्य स्ट्रबेरी क्रीम सकारात्मक गुणहरू धेरै छ। यो ठूलो स्वाद र कोमल बनावट प्रभुत्व छ। मिठाई Kurdi वर्तमान नाजुक स्ट्रबेरी टिप्पणीहरू। आँखा र यो मिठाई को एक उज्ज्वल गुलाबी रंग त्यहाँ खुसी सक्दैन। которого достаточно прост, относят к одному из редких видов заварных кремов, что можно подавать как самостоятельное блюдо, наполнив им красивые креманки. स्ट्रबेरी Kurd, जसको नुस्खा पर्याप्त सरल छ, आफ्नो सुन्दर बरफ-क्रीम कटोरे भर्नु, custards को दुर्लभ प्रकार छुट्टै पकवान रूपमा सेवा गर्न सकिन्छ कि एक काम तोकिएको छ। यसबाहेक, Kurd प्राय स्पन्जले केक अंग्रेजी बनाउन केक लागि एक पत्र रूपमा प्रयोग। तिनीहरूले आटा को बास्केट भर्न यस मिठाई, टोष्ट वा प्यानकेकहरू गर्न सेवा गर्न सकिन्छ।
पकाउने को रहस्य
готовят на водяной бане в посуде из нержавеющей стали. स्ट्रबेरी Kurd एक स्टेनलेस स्टील कचौरा मा एक पानी स्नान मा पकाएको। यो मिठाई को स्वाद बिगार्छ जो, साथै अन्डा कम सानो गांठ, को उपस्थिति तिरस्कार गर्छन्। को क्रीम यो एक कचौरा को तल पानी राम्रो उसिनेर कि सुनिश्चित हुनुपर्छ, यो नाजुक बनावट भएको थियो। मिठाई छैन चाँडै कठोर छ भने, मात्र स्टोभ मा आगो थप्न आवश्यक छ। को क्रीम thickens गर्दा गर्मी देखि यसलाई हटाउन र देखापर्यो हुन सक्छ कि गांठ हटाउन चलनी मार्फत RUB। त्यसपछि भड्काए तेल, पन्नी ढाकिएको र कोठा तापमान, त्यसपछि एक सुन्दर ठाउँमा फसल मा शांत गर्न अनुमति राखे। которого доступны практически каждому, продолжает густеть в холоде, поэтому в случае необходимости получения более легкой текстуры рекомендуется добавить в холодный крем взбитые сливки. द्वारा lubnichny Kurd, जो को सामाग्री लगभग सबैलाई उपलब्ध छ, एक हल्का बनावट प्राप्त गर्न आवश्यकता को मामला मा फिटेको एक चिसो तर थप्न सिफारिस गरिएको छ त, चिसो मा thicken जारी। यो ताजा निचोडा कागति को रस मिठाई खाना पकाउने लागि लागू गर्न महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं कागति ध्यान प्रयोग गर्न सक्दैन। रस हड्डी गर्न चलनी भन्दा squeeze गर्न कचौरा मा पर्दैन सिफारिस गरिएको छ।
स्ट्रबेरी Kurd लागि एक सरल नुस्खा
सामाग्री: ताजा स्ट्रबेरी तीन सय ग्राम, घिउ को एक सय ग्राम, चिनी, कागति को रस र चालीस मिलीग्राम, पाँच अन्डा को एक सय र पचास ग्राम।
तपाईं मिठाई तयार सुरु गर्नु अघि, तपाईंले सबै सामाग्री तयार गर्न आवश्यक छ। बालाको देखि purified स्ट्रबेरी, राम्रो धोए र एक ब्लेंडर मा पीस पठाए। धोए कागति निचोडा रस, को जामुन थपियो र एक Mash गठन गर्ने सँगै चोट छ जो। त्यसपछि, सानो कचौरा मा अन्डा र चीनी, राख्नु राम्रो, whisk बेरी puree थप्न र Corolla भरिएर पोखिन्छ। त्यसपछि भाँडा को प्लेट मा, यो thicken गर्न सुरु सम्ममा हीट यसरी आफ्नो रहनेबारे जोडदार whisk रोकिंदैन गरम जनसंचार राखिएको थियो, तेल थपिएको थियो। которого мы рассматриваем, до получения желаемой густоты. Kurd कुक, हामी इच्छित मोटाई प्राप्त गर्न विचार जो को नुस्खा। तर cooled र चिसो ठाउँमा राख्नु त्यसपछि, कचौरा हटाउन।
स्थिर स्ट्रबेरी देखि Kurd
(примерно сто восемьдесят грамм), два яйца, сорок грамм сахара, пятьдесят грамм масла сливочного. सामाग्री: स्थिर स्ट्रबेरी (बारेमा एक सय र असी ग्राम), दुई, अन्डा, चीनी को चालीस ग्राम, घिउ पचास ग्राम।
पहिले तपाईं सबै आवश्यक उत्पादन तयार गर्न आवश्यक छ। स्ट्रबेरी पहिल्यै भएको फ्रीजर मन्त्री हटाइयो र यो पग्लियो छ भनेर फ्रिज तल तखता मा बदलाव। подтает, ее вместе с соком кладут в блендер и измельчают до состояния пюре. स्थिर स्ट्रबेरी podtaet गर्दा सँगै यसको रस संग एक puree एक ब्लेंडर र जमीन राख्नु भएको छ। तपाईं बारेमा पन्ध्र सेकेन्ड आवश्यक हुनेछ। एक कचौरा मा बेरी वजन पारी, आगो हालेर लगभग एक मिनेट लागि खाना पकाउन उम्लिरहेको पछि। यसैबीच, अन्डा धोए र सुकेको छन्। एक अण्डाको पहेंलो भाग र सफेद मा विभाजित छ, दोस्रो जस्ताको तस्तै बाँकी छ। प्रोटिन त्यो आवश्यक थिएन, राख्नु। एक चलनी मार्फत Puree फेरि अन्डा थप्न र राम्ररी whisk, एक कचौरा मा राखे। त्यसपछि पाउडर, र घिउ परिणत गर्न अग्रिम आवश्यक छ जो चीनी, थप्नुहोस्। यो सबै आगो हालेर निरन्तर जगाएर, दुई मिनेट लागि खाना पकाउन छ। समाप्त स्ट्रबेरी Kurd को अनुरोध मा तपाईं फेरि एक चलनी पास गर्न सक्नुहुन्छ। मिठाई cooled र तालिका खुवाउनुभयो। यो धनी स्वाद र नाजुक बनावट फरक हुनेछ। साथै क्रीम प्यानकेकहरू गर्न अनुकूल।
cupcakes लागि स्ट्रबेरी Kurd
अंग्रेजी Kurd बहुमत केक पछिल्लो गर्न cupcakes हालिदिए थप उज्यालो र पूर्ण-bodied स्वाद हुन्छन्।
सामाग्री: ताजा स्ट्रबेरी तीन सय ग्राम, सेतो चिनी को एक सय र पचास ग्राम, पाँच, अन्डा, मक्खन को एक सय ग्राम, एक कागति।
को जामुन, हल साफ, धोए। लेमन आधा कटौती र, बीउ हटाउने यसलाई बाहिर रस squeeze। रस र स्ट्रबेरी सम्म चिल्लो whisk ब्लेंडर राम्रो। एक मिक्सर संग whisk चीनी संग अन्डा, को बेरी ठूलो र तेल थप्न। यो सबै एक कचौरा मा राखिएको छ, तेल भंग थियो सम्म प्रतीक्षा, एक भाप स्नान धारण जगाएर। अर्को Kurd पकाउन धेरै समय तिनीहरूले फिट हेर्न रूपमा। यो त क्रीम सजिलै cupcakes भराई हुनेछ किनभने, पकाएको गर्दा बेरी जाम रूपमा घनत्व हासिल गर्न सिफारिस गरिएको छ। ठंडा cupcakes मध्य प्वाल कोर स्याउ छ काटन को लागि एक उपकरण संग, उदाहरणका लागि, बनेको छ। यी प्वालहरू तयार स्ट्रबेरी Kurd भरिएका हुन्छन्। तपाईं पनि माथि क्रीम संग cupcakes सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
केक स्ट्रबेरी Kurd संग "काला राजकुमार"
आटा लागि सामाग्री: चार अन्डा, दुई कप चिनी, अमिलो तर दुई कप, पीठो तीन कप, छ चमचा कोका को चमचा, चिया सोडा को दुई चम्मच।
को कुर्द लागि सामाग्री: स्ट्रबेरी तीन सय ग्राम, एक कागति को रस, चीनी को एक सय र चालीस ग्राम, छ, अन्डा, मक्खन को एक सय ग्राम।
को क्रीम लागि सामाग्री: खट्टा क्रीम को दुई कप, चीनी को एक कप, छ चमचा कोको र ब्रान्डी को चमचा।
पाक सोडा र कोका, अन्डा संग मिश्रित पीठो, साथै चिनी संग, सँगै whisk खट्टा क्रीम, पीठो को सानो अंश थप्न र राम्ररी मिश्रण। आटा गरेको सम्म प्रत्येक एक मोल्ड र पाक्नु मा हालिएको, चार भागमा विभाजन गरिएको छ।
स्ट्रबेरी Kurd (केक नुस्खा)
को जामुन, एक ब्लेंडर प्रयोग गरेर puree परिणत भएको कागति को रस थप्न घिउ र मार अन्डा र चिनी एक पानी स्नान मा पग्लियो। Kurd बाक्लो सम्म एक पानी स्नान मा उसिनेर, हलचल गर्न नबिर्स। तयार क्रीम cooled।
खट्टा क्रीम राम्रो चीनी र कोका संग मार, त्यसपछि ब्रांडीको केही spoonfuls थप्नुहोस्।
केक को गठन
Cooled केक तपाईँको लिङ्कमा गर्भवती। प्रत्येक केक स्यान्डविच को क्रीम को क्रीम स्ट्रबेरी Kurd, र त्यसपछि। तर संग केक माथि र Icing संग सजाया, मास्टिक टास्ने गुणहरू संग लेपित।
являет собой нежный крем, что имеет шелковистую структуру. स्ट्रबेरी Kurd एक रेशमी संरचना छ कि एक कोमल क्रीम छ। मौसम समयमा यो ताजा जामुन, र जाडो बाट बनेको छ - स्थिर देखि। तपाईं एक मिठाई वेनिला र दालचिनी थप्न सक्नुहुन्छ। आधार क्रीम - स्ट्रबेरी puree, पकवान जस्तै अन्डा, चीनी र घिउ पनि समावेश छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, घटक को सेट पकाउने प्रक्रिया गर्छ रूपमा, धेरै सरल छ। Curd आइसक्रिम तयार एक उत्कृष्ट आधार यो अक्सर प्यानकेकहरू र cheesecakes लागि सस रूपमा आपूर्ति छ।
स्वाद यसको त बच्चाहरु को रुचाउनु त, स्ट्रबेरी संग curds Kurd बच्चाहरु स्ट्रबेरी मिल्दोजुल्दो छ। धेरै Bakers यो मामला, अझ स्वादिष्ट, कोमल र flavorful मा सुखा खाना पकाउने केक र cupcakes लागि यो क्रीम, प्रयोग गर्नुहोस्। आज, एक Kurd सबै दुनिया भर एक साधारण मीठा पकवान, प्रेम, वयस्क र बच्चाहरु दुवै छ।
ब्रोकोली। खाना पकाउन सिक्नु!
च्याउ सूप को क्रीम: क्रीम नुस्खा
मशरूम संग चिकन, विभिन्न तरिकामा ब्रेज्ड। रोचक व्यञ्जनहरु र खाना पकाउने नियम
यस नुस्खा र तयार गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका: हरे टमाटर देखि कावीयार
पेशे संपादक: शिक्षा, आवश्यकताहरु, वेतन
पास्ता Teymurova - hyperhidrosis को सस्ती तर अत्यधिक प्रभावकारी उपचार
मानव लापरवाही - आगो को कारण
रूस पुरातन cathedrals - फोटो र विवरण
कसरी फैशनेबल गुलाब को रूप मा आफ्नो हातमा एक सुन्दर शरद ऋतु bouquets बनाउने? गाइड
ककटेल पोशाक - एक क्लासिक, सान्दर्भिकता गुमाउनु छैन
कसरी स्वादिष्ट सुखा पोर्क औलाको जौर्नी: पन्नी मा ओवन मा